बोकाले दिन थाल्यो दूध, डाक्टर भए हैरान ! – ramechhapkhabar.com
बोकाले दिन थाल्यो दूध, डाक्टर भए हैरान !
बोकाले दूध दिन्छ भन्दा हामीलाई विश्वास लाग्दैन नै । तर यो कुरा सत्य हो । भारतको राजस्थानस्थित धौलपुर जिल्लामा एक बोकोले दूध दिएपछि सबै हैरा नबनेका छन् । दूध दिने त छँदै छ उक्त बोकाको मालिक दूध पिउँछन् पनि ।
किनेर ल्याउँदा यो बोको भएको तर १० महिना पछि यसमा परिवर्तन देखिएको राजीव बताउँछन् ।
फेरी यसले दूध दिएपछि उनी हैरान भए । त्यसपछि उनले डाक्टरलाई देखाए । डाक्टरले पनि बोकाले दूध दिएको देख्दा हैरान भए ।
पशु चिकित्सकले भने यस्तो घटना हर्मोनका कारण हुने बताएका छन्
सामूहिक खेतीमा रमाउँदै महिला
देवचुली (नवलपुर)– रोजगारीको शिलशिलामा गाउँका अधिकांश युवाहरु विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् ।
परिवार पाल्नकै लागि विदेशमा बसेर श्रम बेचिरहँदा अधिकांश महिलाहरु श्रीमानको कमाइमा बिलासी जीवन बिताइरहेका छन् ।
तर नवलपरासीपूर्व देवचुली नगरपालिका ९ बिशालटारका महिलाहरुलाई भने श्रीमानको कमाइको कुनै प्रवाह छैन । उनीहरु श्रीमानको कमाइमा निर्भर नभई आफै उद्यमशिल भएर आम्दानी गरिरहेका छन् ।
यसअघि परम्परागत रुपमा खेतीपाती गर्दै आएका उनीहरु सामूहिक खेती गर्ने योजनाका साथ तीन वर्षअघि संगठित भएका थिए । समुन्नत महिला कृषक समूह गठन गरी सामूहिक तरकारी खेती गर्दै आएका उनीहरुको समूहमा ४१ जना सदस्य छन् ।
अहिले साढे तीन विगाहा क्षेत्रफलमा उन्नत जातको आलु खेती गरेका महिलाहरु सबै जना एक साथ मिलेर काम गर्छन् । उनीहरु आफ्नै जमीनमा खेती गरिरहेका छन् । एक दुई कट्टा जमीन भएका महिलादेखि १०/१२ कट्ठा जमीन भएका महिलाहरु समूहमा सदस्य छन् ।
खेतबारीमा काम गर्नका लागि उनीहरुले अरु कुनै कामदार खोज्नु पर्दैन । ‘हामी कोही थोरै जग्गा भएका छौं, तर हामी बराबर काम गर्छौ र बढी काम गर्नेलाई श्रमको अतिरिक्त मूल्य जोड्छौं,’ समूहकी अध्यक्ष तारा काफ्लेले भनिन् ।
सामूहिक रुपमा खेती गर्दै आएका उनीहरु बाँझो जमीनलाई उर्वर बनाउन सफल भएकोमा उत्साहित देखिन्छन् ।
सामूहिक खेती प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका यी महिलाहरुले लगाएका नार्कद्वारा सिफारिस गरिएका जनकदेव, एमएस र खुमल रातो जातका उन्नत आलु खेती निकै फस्टाएर आएको छ ।
यसअघि च्याउ खेती गरेका उनीहरुले अहिले उन्नत जातको आलु खेती गरेका हुन् । कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गदै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन कस्सिएका महिलाहरु एक आपसमा हातेमालो गर्दै हरेक दिन बिहान सबेरै खेत–बारीमा निस्कन्छन् ।
दैनिक तालिका नै बनाएर काममा खटिने ती महिलाहरुको समूहलाई आलु खेती प्रवद्र्धन गर्न गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले लगानीको ७५ प्रतिशत अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
सामूहिक खेती प्रणालीमा लागेका महिलाहरुलाई राज्यबाट भएको सहयोगले थप हौसला मिलेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुको ७५ प्रतिसत अनुदान र २५ प्रतिशत कृषक सहभागिता गरी कुल ४ लाख ८५ हजार ६ सय ७५ रुपैंयाको प्रारम्भिक लागतमा आलु खेती गरेका छन् ।
विगतमा परम्परागत खेतीप्रणालीबाट आफ्नो गर्जो टार्नसमेत मुश्किल पर्ने गरेकोमा व्यावसायिक रुपमा खेती गरेर आम्दानी गर्न थालेपछि सफलताको महशुस भएको उक्त महिला कृषक समूहकी उपाध्यक्ष रुपा रानाले बताइन् ।
परम्परागत रुपमा गर्ने गर्ने गरेका उनीहरुले यति धेरै क्षेत्रफलमा एउटै योजनामा आवद्ध भएर व्यावसायिक खेती गर्न थालेपछि अन्य महिलाहरुले समूहमा आवद्ध हुन चाहेको अध्यक्ष काफ्लेले बताइन् ।
आफ्नो श्रीमानबाट दुई चार पैसाका लागि हात थाप्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएकामा यी महिलाहरु औधि खुशी छन् ।
आफूलाई आवश्यक पर्ने दुई चार रुपैयाँका लागि पनि पुरुषहरुसँग हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता हटेको महिला समूहकी सचिव कलावती बस्यालले बताइन् ।
‘आफै उद्यमी भएपछि आम्दानी गर्न सकिने र पुरुषसँग हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ बस्यालले भनिन् । अहिले लगाइएको आलुखेतीबाट देवचुली नगरपालिकाको ९ नम्बर वडा मात्र होइन, देवचुली नगरपालिका नै आत्मनिर्भर हुने उनीहरुको विश्वास छ ।
\_यो सिजनको आलु उत्पादनपछि बोडी र काँक्रा लगाउन महिलाहरुले बेर्ना तयारी गरिसकेका छन् ।